साफ च्याम्पियनसिपः नेपालले गोल खायो, माल्दिभ्स १-० ले अगाडि ! [अपडेट] - Everest Dainik - News from Nepal
साफ च्याम्पियनसिपः नेपालले गोल खायो, माल्दिभ्स १-० ले अगाडि ! [अपडेट]
काठमाडौं, भदौ २७ । साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत सेमिफाइनलमा नेपाल र माल्दिभ्सबीच खेल भइरहेको छ। बुधबार अपरान्ह नेपाली समयअनुसार ३ बजेर ४५ मिनेटमा ढाकाको बंगबन्धु रंगशालमा खेल सुरु भएको हो ।
माल्दिभ्सले नेपालविरुद्ध सुरुवाती अग्रता लिएको छ । दशौं मिनेटमा माल्दिभ्सले गोल गरेको हो । डिबक्स बाहिर पाएको फ्रिकिकमा उसले गोल गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुस साफ च्याम्पियनसिपः नेपाल सेमिफाइनलमा माल्दिभ्ससँग भिड्ने, नतिजा कसको पक्षमा ?